Top 10 miếng dán giảm đau hiệu quả nhất được tin dùng 2022 | Muasalebang - Muasalebang
Kinh nghiệm 0 lượt xem 21/05/2022
Đang Đọc: Top 10 miếng dán giảm đau hiệu quả nhất được tin dùng 2022 | Muasalebang in Muasalebang
Empilweni noma osukwini, ubuhlungu obungalindelekile obufika, kungakhathaliseki ukuthi bufushane noma bude, buzokwenza ungakhululeki futhi buphazamise eminye imisebenzi, kodwa ukuphuza umuthi kuzosebenza kancane kakhulu. Ngakho isiqephu sokuqeda ubuhlungu yilokho okudingayo ngokushesha ukuxazulula lesi simo.
Emakethe namuhla, kunezinhlobo eziningi zeziqephu zokudambisa izinhlungu ezinamandla ahlukene kanye nemvelaphi yokukhulula ubuhlungu, ungabhekisela ku-Top 10 wokuqeda ubuhlungu ngezansi ukuze uzikhethele uhlobo olufanele izidingo zakho.
1 Iyini i-patch yokudambisa izinhlungu?
1.1 1. I-Salonpas Pain Relief Patch
1.2 2. I-THERMACARE ESEMVA OKUPHANSI NOKUSHISA KWE-HIP KUGOQA I-THERMACARE EMVA KOKUPHANSI KANYE NE-HIP HEAT EGOQA
1.3 3. I-Korean Red Ginseng Namathisela
1.4 4. Izitika Zengwe – Ukunciphisa Izinhlungu Ze-Rheumatoid
1.5 5. Iziqephu Zehlombe Nentamo Zomuthi WaseMpumalanga kanye Nomuthi Wamakhambi
1.6 6. I-Pip Elekiban Pain Relief Patch – Ithuthukisa Ukujikeleza Kwegazi
1.7 7. I-White Tiger Balm Joint Relief Patch
1.8 8. Roihi Tsuboko acupressure patch
1.9 9. I-Sumifun Pain Relief Plaster
1.10 10. Iziqephu Zomhlonyane Zokuqeda Izinhlungu
Iyini i-patch yokudambisa izinhlungu?
Iziqephu zokudambisa izinhlungu amapheshana erabha amancane aqukethe isithako esisebenzayo esidambisa izinhlungu. Uma isetshenziswe ngokuqondile endaweni ebuhlungu, izithako ezisebenzayo ku-patch zizongena ngesikhumba ngaphakathi, zisize ukujikeleza igazi futhi zenze imisipha iphumule, lapho ubuhlungu buzokhululeka khona. Iziqephu zokudambisa izinhlungu zivame ukusetshenziselwa ukudambisa izinhlungu zamalunga noma lapho ubhekana nokuhlukumezeka noma amandla angaphandle emzimbeni. Izidambisi eziningi zesimanje ezidambisa izinhlungu zinezithako eqenjini elidambisa izinhlungu lama-antibiotics angena ezicutshini nasemisipha ukunciphisa ukuvuvukala nobuhlungu. Ngakho-ke, ngaphambi kokusebenzisa i-patch yokudambisa ubuhlungu, funda ngokucophelela imiyalelo ephrintiwe ephaketheni. Zisebenzise ngendlela efanele, ngesikhathi esifanele, gwema ukuzisebenzisa ngokweqile noma uzinamathele isikhathi eside, okubangela ukuvaleka kwesikhumba sakho namanxeba.
1. I-Salonpas Pain Relief Patch
Inketho engcono kakhulu okufanele uyithenge
Xem Thêm Top 30 Bộ Anime Buồn Nhất Khóc Trọn "1 Lít Nước Mắt" | Muasalebang
Ungasebenzisi esikhumbeni esilimele, izilonda ezivulekile, amehlo, isikhumba esiseduze kwamehlo, ulwelwesi lwamafinyila kanye nabantu abangezwani nanoma yiziphi izithako.
Ukuqeda ukuvuvukala, ukudambisa izinhlungu ezinhlungwini ezihambisana nalokhu: Ubuhlungu bamahlombe, iqolo, ubuhlungu bemisipha, ukukhathala kwemisipha, ubuhlungu bamalunga, imihuzuko, ukuhlakazeka, ukungezwani kwemisipha, ubuhlungu bekhanda, ukuqaqamba kwamazinyo.
I-Salonpas paste isetshenziselwa ukukhulula ubuhlungu obusheshayo, ukulwa nokuvuvukala ebuhlungu obuhambisana nezimpawu zobuhlungu obuhlangene, ubuhlungu bemisipha, i-backache, i-muscle strain, i-sprain, izinyo. Umkhiqizo uyisixazululo esikahle sokunakekela impilo yomndeni wakho.
Ukuphikisana: Ungasebenzisi esikhumbeni esilimele, izilonda ezivulekile, amehlo, isikhumba esiseduze kwamehlo, ulwelwesi lwamafinyila kanye nabantu abangezwani nanoma yiziphi izithako.
Imiyalo yokusetshenziswa: Izinkomba: Anti-inflammatory, ukudambisa izinhlungu ebuhlungwini obuhlobene nalokhu: Ubuhlungu behlombe, iqolo, ubuhlungu bemisipha, ukukhathala kwemisipha, ubuhlungu bamalunga, imihuzuko, imihuzuko, ukugogeka kwemisipha, ikhanda, ukuqaqamba kwamazinyo . Umthamo nokuphatha: Abantu abadala kanye nezingane ezineminyaka engu-12 nangaphezulu: Geza futhi womise indawo ethintekile. Susa isiqephu bese usisebenzisa endaweni ebuhlungu hhayi izikhathi ezingaphezu kuka-3 ngosuku futhi hhayi ngaphezu kwezinsuku ezingu-7. Susa isiqephu esikhumbeni ngemva kwamahora angu-8.
Izingane ezingaphansi kweminyaka engu-12: Bonana nodokotela ngaphambi kokusebenzisa.
Isexwayiso: Okokusetshenziswa kwangaphandle kuphela. Ungasebenzisi izinjongo ezingezona ezishiwo.
2. I-THERMACARE ESEMVA OKUPHANSI NOKUSHISA KWE-HIP KUGOQA I-THERMACARE EMVA KOKUPHANSI KANYE NE-HIP HEAT EGOQA
Olandelayo, ukukhetha okuhle
Idizayinelwe ukujikela umzimba wakho, iwugcine usendaweni futhi uvumelane nokunyakaza kwakho, futhi izacile ngokwanele ukuthi ungayigqoka ngaphansi kwezingubo ezihlakaniphile.
Igumbi lokushisisa libekwe eduze kwesikhumba sakho ukuze ilethe ukushisa lapho ukudinga khona kuze kufike emahoreni ayi-16 okudambisa izinhlungu (amahora angu-8 uvuliwe, amahora angu-8 ukuphumula)
Indawo yesixhumanisi enkulu engalungiswa kabusha kalula
Isebenzisa: I-patch inikeza ukukhululeka kwesikhashana kwezinhlungu ezincane zemisipha emhlane kanye nobuhlungu obubangelwa ukusetshenziswa ngokweqile, ukulimala kwemisipha kanye nama-sprains.
Xem Thêm Sách tiki có tốt không? Hướng dẫn cách mua sách trên tiki giá rẻ nhất | Muasalebang
Sebenzisa i-thermal patch ye-ThermaCare ezimweni ezilandelayo: uma usebenza (ukuzivocavoca, ukudlala imidlalo, ukuphuma nomndeni, umsebenzi wezandla). Ukuhlala endaweni eyodwa isikhathi eside (ukuhlala edeskini, emotweni noma endizeni).
Imiyalo yokusetshenziswa: vele uvule iphakheji futhi ungayisebenzisa ngokushesha. Ungasebenzisa isiqephu endaweni ebuhlungu ngokushesha ngemva kokuvula, noma ulinde imizuzu engu-30 ukuze isiqephu sifudumale ngaphambi kokusifaka endaweni ebuhlungu. Namathisela uhlangothi olumnyama phakathi
3. I-Korean Red Ginseng Namathisela
Ikhishwe ekukhishweni kwe-ginseng ebomvu, isiza ukukhulula ubuhlungu bemisipha, ubuhlungu bamalunga nama-sprains.
Isikhwama esincane esikahle esinosayizi ophakathi ukuze ukwazi ukusinamathisela noma yikuphi emzimbeni wakho
Isikhwama se-ceramic red ginseng patch bag izingcezu ezingama-20, usayizi 93mm x 132 mm Izithako nokusetshenziswa: Isiqeshana se-Ginseng siqukethe ungqimba olungaphezulu olu-1 olunokukhishwa kwe-ginseng olungena ngqo esikhumbeni, ungqimba olu-1 lapho lusetshenziswa emzimbeni lusebenza njengejeneretha yensimu kazibuthe yezokwelapha. uzibuthe unomphela okhuthaza ukuphumula kwemisipha, ukukhulula ubuhlungu, nokululama ngokushesha. I-paste isiza ukukhulula ngokushesha ubuhlungu, ikhuthaza ukubuyiswa kwendawo ebuhlungu futhi ingalimazi isikhumba. I-paste ingena ngokujulile endaweni ebuhlungu ukusiza ukukhulula ubuhlungu ngokushesha nangempumelelo, ubuhlungu bemisipha, i-neuralgia, ikhanda elibuhlungu, ubuhlungu behlombe, ubuhlungu beqolo; ukulimala kokunyakaza.
4. Izitika Zengwe – Ukunciphisa Izinhlungu Ze-Rheumatoid
Umphumela wokunciphisa ubuhlungu, ukwandisa ukujikeleza kwegazi.
Amacala obuhlungu bamathambo namalunga, ubuhlungu be-arthritis, i-myositis, i-sprains, ubuhlungu bezinyo, ikhanda elibuhlungu, i-sciatica, i-back pain….
I-Tiger paste, eyaziwa nangokuthi i-muskrat, i-paste endala kakhulu ekhiqizwa izithako ezikhethekile ukusiza ukukhulula ubuhlungu, ukukhathala kwemisipha ngemuva, amahlombe, i-nape, ubuhlungu obuhlangene, ubuhlungu ngenxa ye-sprain … emakethe kunezinhlobo eziningi ezahlukene. namanani ekhwalithi ehlukene.
Isetshenziswa kanjani: Namathisela ukusetshenziswa kwangaphandle, namathisela ngqo endaweni ebuhlungu. Ungasebenzisi emanxebeni avulekile.
5. Iziqephu Zehlombe Nentamo Zomuthi WaseMpumalanga kanye Nomuthi Wamakhambi
Ngokushesha khulula izimpawu zobuhlungu obuhlangene (ubuhlungu behlombe, ubuhlungu bentamo, ubuhlungu bamadolo, ubuhlungu beqolo, ikhanda, …). Thuthukisa izifo ezihlanganisa i-neuralgia, i-rheumatism, …
I-patch yobuhlungu be-back inciphisa imihuzuko, i-dislocation (ngaphandle kwamanxeba avulekile). Ukuthuthukisa ngokuphawulekayo ukukhathala kwemisipha okubangelwa ukuvivinya umzimba okunzima.
Xem Thêm Review Top 5 sữa rửa mặt Laneige bán chạy nhất hiện nay | Muasalebang
I-patch yemithi yasempumalanga enezithako ze-herbal, i-patch inomphumela wokukhulula ubuhlungu obubangelwa imidlalo eyeqile, i-sprains, ubuhlungu be-back, ubuhlungu bemisipha, ubuhlungu bentamo nehlombe ngenxa yokuhlala isikhathi eside ehhovisi, ukukhathala kokuhamba ngesitimela, ukuvivinya umzimba noma ukukhathala kwemisipha.
Imiyalo yokusetshenziswa: Hlanza isikhumba ngaphambi kokufaka isicelo. Susa i-plaster efilimu, uyifake ngqo endaweni ebuhlungu. Ungasebenzisi emanxebeni avulekile, ukuvuvukala kwesikhumba, ulwelwesi lwamafinyila, eduze kwamehlo …
Faka isicelo kuphela esikhumbeni esomile.
Isiqephu kufanele sisuswe imizuzu engu-30 ~ 1 ihora ngaphambi kokugeza.
Misa i-SD lapho ubona izimpawu ezingavamile.
Unganamathiseli ngokushesha ngemva kokugeza.
6. I-Pip Elekiban Pain Relief Patch – Ithuthukisa Ukujikeleza Kwegazi
Iglue ethambile, akukho ukucasuka kwesikhumba, kunzima ukubona umbala wesikhumba, ayikho ingcina ngemva kokunamathela
Akukho phunga, awekho amakhambi okwelapha
Kulula ukuyisebenzisa, ingasetshenziswa ezindaweni eziningi emzimbeni
Igcina umphumela ngesikhathi sokunamathisela, ayiqedi lapho ushawa
Uma kukhulu ukuminyana kwe-flux, umphumela uyashesha
Isimiso sokusebenza: Ngenxa yamandla kazibuthe aphuma ezinhlayiyeni zikazibuthe, isiqephu sokusiza izinhlungu se-PIP Elekiban sizothinta ngokuqondile imisipha eqinile, sivule imithambo yegazi eboshiwe, sisuse ubuthi futhi sikhulule ubuhlungu. Isebenzisa: Ngenxa yamandla kazibuthe aphuma ezinhlayiyeni zikazibuthe, isiqephu sokukhulula ubuhlungu se-PIP Elekiban sizothinta ngokuqondile imisipha eqinile, sivule imithambo yegazi empintshekile, sisuse ubuthi futhi sikhulule ubuhlungu ngendlela.
7. I-White Tiger Balm Joint Relief Patch
Ukukhululeka okusheshayo kwezinhlungu ezihlukahlukene ezihambisana nokukhathala kwemisipha, ubuhlungu bemisipha, ihlombe eliqinile, ubuhlungu beqolo obulula, ubunzima bemisipha, ukugoqa, ukuphuka, ukuphuka, ukuphuka, isithwathwa esincane, isifo samathambo.
Iphesenti eliphezulu lesidakamizwa, umphumela osheshayo, umphumela ohlala isikhathi eside I-biocompatibility enhle, akukho ukungezwani komzimba nokucasuka kwesikhumba Ukukhululeka ngokushesha kwezinhlungu ezihlukahlukene ezihambisana nokukhathala kwemisipha, ubuhlungu bemisipha, ukuqina kwehlombe, ukuqaqamba kweqolo elilula, ukugogeka kwemisipha, ukuhlakazeka, imihuzuko, ukuphuka, isithwathwa esincane , isifo samathambo. Ukunamathela okufanele, kubambelela ngokuqinile esikhumbeni, akunamatheli ezinweleni zomzimba Ukuphefumula kahle nokumuncwa kwamanzi, kugwema ukucwiliswa kwesikhumba emanzini ukuze kusetshenziswe isikhathi eside.
8. Roihi Tsuboko acupressure patch
Uma udlala i-sports, hamba uhambo olude lwemoto, uhlale ehhovisi … noma ube neqolo, ubuhlungu bentamo, izinhlungu zemilenze noma ikuphi, vele unamathele futhi kuzosiza ngokushesha Ikakhulukazi abantu abadala bavame ukuba nezinhlungu. ubuhlungu, ubuhlungu ezithweni, ukusetshenziswa ngempumelelo kakhulu, kuwumkhiqizo odingekayo ngempela kuwo wonke umndeni.Yehlisa ubuhlungu bentamo, ubuhlungu beqolo, imihuzuko, ama-sprains, ubuhlungu bamalunga, ubuhlungu bemisipha, ukukhathala kwemisipha, ukuba ndikindiki ezandleni nasezinyaweni, kunciphisa ubuhlungu. i-fracture, isiza ukujikeleza kwegazi, i-anti-inflammatory iphumelela kakhulu. Isetshenziswa kanjani: namathisela ngqo endaweni ebuhlungu. Qaphela: kungase kube khona ukuvutha okuncane noma ukuzwa kokuluma lapho isiqeshana esisha sisetshenziswa, kodwa lokho kungumphumela womuthi lapho udonswa esikhumbeni.
9. I-Sumifun Pain Relief Plaster
Yenziwe ngezingcaphuno zamakhambi asendulo aseShayina abalulekile, isheshe ipholise ubuhlungu.
Amaphesenti aphezulu ezidakamizwa, ukwenza ngokushesha, imizwa ehlala isikhathi eside, ungalokothi uhlupheke ngalezo zinhlungu.
I-biocompatibility enhle kakhulu, ayibangeli ukungezwani komzimba nokucasuka kwesikhumba.
Ukubamba kumaphakathi, kunamathela ngokuqinile esikhumbeni kodwa ngeke kukwenze uzwe ubuhlungu lapho uvula ijwabu leso.
Ukuphefumula kahle nokumuncwa kwamanzi, gwema ukucwiliswa kwesikhumba emanzini isikhathi eside.
Yenziwe ngezingcaphuno zamakhambi asendulo aseShayina abalulekile, isheshe ipholise ubuhlungu. Amaphesenti aphezulu ezidakamizwa, ukwenza ngokushesha, imizwa ehlala isikhathi eside, ungalokothi uhlupheke ngalezo zinhlungu. I-biocompatibility enhle kakhulu, ayibangeli ukungezwani komzimba nokucasuka kwesikhumba. Ukubamba kumaphakathi, kunamathela ngokuqinile esikhumbeni kodwa ngeke kukwenze uzwe ubuhlungu lapho uvula ijwabu leso. Ukuphefumula kahle nokumuncwa kwamanzi, gwema ukucwiliswa kwesikhumba emanzini isikhathi eside.
10. Iziqephu Zomhlonyane Zokuqeda Izinhlungu
Thuthukisa ukujikeleza kwegazi
Ifanele wonke amasizini
Ukushisa kwandisa ukugeleza kwegazi endaweni elimele.
Isiza ukuthuthukisa ukujikeleza kwegazi.
Isetshenziselwa: Ihlombe, intamo, i-nape, iqolo, ubuhlungu bamadolo
Incazelo Yomkhiqizo: Ikhishwe ezitshalweni. Sebenzisa ukwelapha ukushisa okuyingqayizivele. Umkhiqizo ungangena ujule emsipha lapho ubuhlungu bukhona. Ukushisa kwandisa ukujikeleza endaweni elimele noma ebuhlungu, okusho ukuthi umoya-mpilo owengeziwe kanye nezakhamzimba zilethwa esicutshini esilimele. Umkhiqizo usiza ukwelula izicubu ezithambile, uphumule imisipha, ukhuthaze ukuguquguquka futhi usize ukunciphisa i-spasticity. Umkhiqizo ubuye ube nomthelela omkhulu ekuthuthukiseni ukujikeleza kwegazi. Sekuyisikhathi eside umkhiqizo usetshenziswa njengekhambi lemvelo lobuhlungu nokuqina.
Ngenhla uhlu lwemikhiqizo ye-patch yokudambisa izinhlungu eyi-10 ethandwa kakhulu namuhla. Ngethemba ukuthi izihloko ezimbalwa zizoba iziphakamiso eziwusizo kuwe. Uma udinga ukuxoxa, hlaziya, sicela usebenzise isigaba sokuphawula esingezansi.